Chinese Rhubarb - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Chinese Rhubarb
Chinese Rhubarb ကဘာလဲ။
Chinese rhubarb ကို ဝမ်းပျော့ဆေးအနေနဲ့ ရော၊ ဝမ်းမသွားဖို့ပါ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Rhubarb ဟာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အစာအိမ် သွေးထွက်ခြင်းနဲ့ အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးဖို့ ပြင်ဆင်ခြင်းတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အချို့သူတွေဟာ ဝမ်းသွားစဉ် ညှစ်ရတာ သက်သာတာကြောင့် Rhubarb ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါဟာ လိပ်ခေါင်းရှိသူတွေမှာ နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး စအိုအဝမှာ ရှိတဲ့ အရေပြားအကြောင်းလေးတွေ ကွဲထွက်ခြင်းကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ သူ့ကို ခဏတာသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Rhubarb ကို detoxifying regimen ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ Rhubarb ကို cold sores တွေကို ကုသဖို့ အရေပြားပေါ်ကို လိမ်းပြီးလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
Chinese rhubarb ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Rhubarb ဟာ ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေမှာ ဝမ်းပျော့စေတဲ့အာနိသင်ရှိတယ်လို့ အခိုင်အမာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒီဆေးကို ACEI နဲ့ captopril, ရင်တုန်သက်သာဆေးတွေနဲ့ ပေါင်းသောက်ရင် တစ်မျိုးတည်းသောက်တာတွေထက် စာရင် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုတွေမှာ အာနိသင် ပိုရှိပါတယ်။
သွေးနဲ့ ဆီးအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ electrolytes တွေကို စစ်သင့်ပြီး ကြွက်တက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း ရှိမရှိလဲ ကြည့်နေသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆေးကိုရပ်သင့်ပါတယ်။
Rhubarb ကို အခြားဆေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လေထတာကို သက်သာစေဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စုပ်ယူအားအကောင်းဆုံး ဖြစ်စေဖို့ ဒီဆေးကို အခြားဆေးတွေ၊ antacid တွေ၊ နွားနို့တွေ သောက်ပြီး တစ်နာရီအတွင်းမှာ မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။
Rhubarbကို အောက်ပါ အခြေအနေတွေ ရှိရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
•	ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ ကလေးနို့တိုက်နေခြင်း
•	ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း
•	အစာအိမ်လမ်းကြောင်း အခြေအနေများ
•	ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်ခြင်း
Rhubarb ဟာ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
•	ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း ဗိုက်နာခြင်း
•	ဆီးအရောင်ပြောင်းခြင်း၊ ဆီးအတွင်း သွေးပါခြင်း၊ ဆီးအတွင်း albumin ပါခြင်း
•	ဗီတာမင် သတ္တုဓါတ် ချို့တဲ့ခြင်း၊ fluid and electrolyte imbalances
အစာအိမ်ဆေးတွေဟာ Rhubarb ကို တစ်နာရီအတွင်းသောက်မယ်ဆိုရင် သူ့အာနိသင်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
Rhubarb ကို ရေရှည်စွဲသောက်မယ်ဆိုရင် potassium ပမာဏကို ကျဆင်းစေပြီး ရင်တုန်ပျောက်ဆေးတွေ၊ cardiac glycosides တွေနဲ့ corticosteroids တွေရဲ့ အာနိသင်ကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
သွေးအတွင်း calcium နည်းပါးခြင်းဟာ Rhubarb ကို licorice root နဲ့ တွဲသုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် တွဲသုံးခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
Clinical trials တွေမှာ Rhubarb အခြောက်ကို 20-50mg/kg နေ့စဉ် သောက်သင့်ပါတယ်။
Chinese rhubarb ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Chinese rhubarb ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Extract, ပေါင်ဒါမှုန့်၊ အရည်၊ သောက်ဆေးပြား၊ တင်ချာရည်
version. Page 172.
Rhubarb. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 214-rhubarb.aspx?activeingredientid=214&activeingredientname=rhubarb. Assessed August 7, 2016.
Rhubarb. http://www.drugs.com/npp/rhubarb.html. Assessed August 7, 2016.Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print
Rhubarb. http://www.drugs.com/npp/rhubarb.html. Assessed August 7, 2016.